Suzana Dhakal (Model and actress)
Topic: Suzana Dhakal (Model and actress)
Author Topic: Suzana Dhakal (Model and actress) (Read 8957 times)
« on: March 23, 2015, 09:50:41 AM »
Actress -- >
HAPPY Birthday -- March 21, 2015 -- turned 19 years old
Re: Suzana Dhakal (Model and actress)
« Reply #1 on: May 12, 2015, 02:45:07 AM »
‘सुरु–सुरुमा काम दिन्छु भन्नेहरु सम्झौता गर्न खोज्थे’
काठमाडौं । मोडल तथा अभिनेत्री सुजना ढकाललाई यतिखेर भ्याइ–नभ्याइ छ । ३० भन्दा बढी म्युजिक भिडियोमा मोडलिङ गरिसकेकी सुजना केही दिनअघि मात्र चलचित्र ‘प्रेमी’ को सुटिङबाट फुर्सद भएकी हुन् । उनलाई हिजोआज पनि अभिनय र मोडलिङका प्रस्तावहरू आइरहेका छन् । दिनदिनै व्यस्त हुन थालेपछि उनी खुसी छिन् तर, खुसीसँगै आफ्नो सुरुआती दिन सम्झेर सुजना दुखी पनि । भानुभक्त मेमोरियल कलेजमा बिबिएमा अध्ययनरत सुजना भन्छिन्, ‘अहिले त खुसी छु । काम पाइरहेकी छु । तर, यहाँसम्म आइपुग्नका लागि मैले निकै संघर्ष गरेकी छु ।’
उनका अनुसार जतिखेर अवसरको खोजीमा भौतारिँदै थिइन्, त्यतिखेर धेरै निर्माता/निर्देशकले फाइदा लिन खोजेका थिए । ‘धेरैले काम त दिन्छु भन्थे, तर प्राय सबैले केही सम्झौता गरौँ भन्थे’ मोडलिङमा करिअर बनाउने सपनासहित धरानबाट राजधानी छिरेकी सुजना भनिन्, ‘सबैले फाइदै मात्र लिन खोजेपछि एकपटक फ्रस्टेसन नै भएँ । जसले पनि फाइदा मात्र लिन खोजेको देख्दा यो क्षेत्रमै नबसुँजस्तो पनि लागेको थियो ।’ अहिले फ्रस्टेसन मुक्त भएको उनले बताइन् ।
हुन पनि कला क्षेत्रमा बलेकै आगो तापिन्छ । नत्र, नयाँलाई अवसर दिने बहानामा विभिन्न खाले शोषण गर्ने प्रवृत्ति छ । यस्तै प्रवृत्तिको जालोमा आफूलाई पनि पार्न खोजिएको सुजनाले बताइन् । ‘म आफ्नै कला र क्षमताले अगाडि बढ्न चाहन्थे’ उनले भनिन्, ‘तर, कला क्षेत्रमा नयाँलाई अर्कै नजरले हेरिँदोेरै’छ ।’
गायिका रजिना रिमालले गाएको ‘किन आएछ याद तिम्रो’ गीतमा मोडलिङ गरेपछि उनले ग्ल्यामरस दुनियाँमा करिअर सुरु गरेकी हुन् । त्यसपछि धेरैले उनलाई मोडलिङका लागि प्रस्ताव गरे । तर, ती सबैमा उनी मोडलिङ गर्न असमर्थन भइन् । कारण, त्यही जटिल सम्झौता थियो । सुजना भन्छिन्, ‘सिधै त भन्दैनथिए, तर, गुमाउरो पारामा भनेको बुझ्थेँ । र, कामै गर्दिनथिएँ ।’ उनका अनुसार त्यो ‘सम्झौता’ भनेको शारीरिक सम्पर्कसम्म हुन्थ्यो । सुजनाले आफ्नो सुरुआती दिन सम्झिँदै भनिन्, ‘निर्माता तथा निर्देशकसँग सम्झौता गरेको भए अहिले पनि योभन्दा चर्चित भइसक्थेँ होला । तर, मैले त्यो चाहिनँ । आउँदा दिनमा पनि नचाहिँदो सम्झौता गरेर अगाडि बढ्न चाहन्नँ । अहिले जे छु, ठीकै छु ।’
सुजनाको डेब्यु चलचित्र ‘आवारा’ हो । जुन चलचित्र बिहीबार (आज) पहिलोपटक प्रिमियर हुँदै छ । उनी उक्त चलचित्रबाट आशावादी पनि छिन् । ‘आवारा’ मा बिन्दास युवतीको भूमिकामा रहेको उनले बताइन् । मोडलिङ र अभिनयमा दुवैमा उत्तिकै रुचि लिएर अगाडि बढिरहेकी उनले भनिन्, ‘प्रेमीमा पनि मेरो राम्रो भूमिका छ । यो त्रिकोणात्मक प्रेम कथामा आधारित चलचित्र हो ।’ विवेक थापाको निर्देशन तथा कृष्णश्री काफ्लेको निर्माण रहेको ‘प्रेमी’ मा सुजना एक कुसल प्रमिकाको भुमिकामा दर्शकले पाउनेछन् । ‘प्रेमी मेरो दोस्रो चलचित्र हो’ सुजना भन्छिन्, ‘प्रेमीबाट दर्शकको प्रेम पाउने अपक्षा गरेकी छु ।’ -
sujana-dhakal-3.jpg (137.86 kB, 533x800 - viewed 769 times.)
sujana-dhakal-2.jpg (192.23 kB, 738x800 - viewed 1266 times.)
« Reply #2 on: May 12, 2015, 04:13:48 AM »
फेसबुकमा प्रेम प्रस्ताव आउने गर्दछन् :- नायिका सुजना ढकाल
पछिल्लो समय नेपाली सिने नगरिमा नव नायिका हरु को प्रवेश बढ्दो छ तर एक दुई चलचित्रमा काम गरेपछि हराउने र यस क्षेत्र देखी टाढा हुने को सँख्या पनि उत्तिकै छ । करिब ३० जति म्युजिक भिडियो मा काम गरेकी मोडल सुजना ढकाल चलचित्र आवारा मार्फत सिने नगरिमा प्रबेश गर्दैछिन् ।झापा गृह जिल्ला रहेककी १९ बर्षे यि सुन्दरी को चर्चित मोडल र सफल नायिका बन्ने लक्ष्य रहेको छ । तिनै नव – नायिका सुजना ढकाल सँग नेपाली फिल्मी डट कम ले गरेको कुराकानी …..
आजकल के मा व्यस्त हुनुहुन्छ ?
चलचित्र प्रेमि भर्खरै चलचित्रको छायँकन सकिएको छ । एउटा गित बाँकी छ केही दिनै छायँकन हुन्छ ।
प्रेमि कस्तो चलचित्र हो ,सिनेमा मा तपाई को भुमिका ?
त्रिकोणात्कम प्रेम कथामा आधारित छ , प्रेमिका को भूमिका मा देखीदै छु ।
के लाग्छ यो सिनेमा सुजना ढकाल लाई सिने नगरी मा स्थपित गराउछ होला ?
कथा बस्तु राम्रो छ साथै चलचित्र चल्न लाई पब्लीसिटि ले पनि महत्व राख्दछ यदि पब्लीसिटि राम्रो भयो भने अबश्य नै मलाई स्थापित गराउँछ ।
अत्याधिक पव्लिसिटी गरिएका सिनेमा हरु ले पानि पनि भन्न नपाएको उदाहरण त धेरै छन् नि ?
कतिपय कुराहरु भाग्यमा पनि भर हुन्छ ।
नव नायिका हरु आफू चल्नका लागि बढि अङ्ग प्रदर्शन गर्छन भन्ने आरोप छ नि के भन्नू हुन्छ ?
त्यो भनेको आफ्नो खुसिको कुरा हो मोडल भएपिछ अलि कति त एक्पोज हुनै पर्यो नि हैन र , ग्ल्यामर हुनु पर्छ भल्गर हुनु भएन तर चर्चा मा आउन कसैले आफ्नो खुसि बढि नै प्रर्दशन गर्छन् भने मेरो भन्नु केही छैन ।
मोडल हरु बिच प्रतिस्पर्धा नै छ नि अङ्ग प्रदर्शन गर्ने , एक प्रतिस्पर्धि सुजना ढकाल पनि हुन् , हो कि होइन ?
मलाई त्यस्तो लाग्दैन ।
नव नायिका हरुको अवस्था कस्तो छ ?
मेरो ठिक छ अरु को कस्तो छ थाहा भएन ।
चलचित्रमा काम गरेवापत कति पारिश्रमिक लिनुहुन्छ ?
मलाई राम्रो नै दिनु भएको छ , चित्त बुझ्दो छ सन्तुष्ट छु । यति नै भनेर भने चाहिँ नभनौ ।
कति बर्ष को उमेरमा मोडलिङ मा लाग्नु भयो ?
१५ बर्ष देखी लागेकि हुँ ।
अहिले कति बर्ष हुनुभयो ?
भर्खरै १९ बर्ष मा लागेकी छु ।
प्रेम प्रस्ताबहरु कति आउँछन् ?
फेसबुकमा प्रेम प्रस्ताव अत्याधिक आउने गर्दछ ।
कसै सँग प्रेम सम्बन्धमा हुनुहुन्छ ?
नाई छैन आफ्नो लक्ष्यमा नपुगे सम्म बनाउने ईच्छा छैन ।
चर्चित मोडल तथा सफल नायिका ।
आज सम्म सेक्स को अनुभव छ कि छैन ?
त्यता तिर नलागौ होला , व्यक्तिगत कुरा हो ।
तपाइलाइ आफ्नो सेक्सी लाग्ने अङ्ग कुन हो ?
ओठ र आँखा
तपाइलाइ मन पर्ने नेपाली तीन नायक ?
अनमोल केसि , आर्यन सिग्देल र सबिन श्रेष्ठ
कुन चाँहि नायक सँग अनस्क्रिन रोमान्स गर्ने ईच्छा छ ?
अन्त्यमा के भन्नू हुन्छ ?
मलाई आज सम्म सहयोग र माया गर्नुहुने सम्पूर्ण फ्यान हरु र मिडिया लाई हृदय देखी धन्यबाद दिन चाहान्छु । साथ साथै नव बर्ष २०७२ को सम्पूर्ण मा हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहान्छु ।
« Reply #3 on: May 12, 2015, 08:45:24 AM »
Sujana Dhaka 1.JPG (18.88 kB, 323x448 - viewed 1077 times.)
suzana dhakal 1.jpg (188.35 kB, 650x670 - viewed 2676 times.)